Wasiirrada Difaaca iyo Arrimaha dibadda oo maanta Baarlamaanka hortegey. – Radio Daljir
Wasiirrada Difaaca iyo Arrimaha dibadda oo maanta Baarlamaanka hortegey.
Diseembar 11, 2012 6:48 b 0
Muqdisho, 11-Dec- R/wasaare ku xigeenadda ahna wasiiradda arimaha dibadda iyo wasiirka gaashaan-dhigga ayaa maanta hortagay mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya? iyagoo dhagaysanayay kana jawaabayay su?aallo ay waydiinyeen mudanayaashu.
Kulanka ay golaha wakiiladu maanta oo talaadaa ku yeeshay xarunta baarlamaanka ayaa waxaa ka soo qayb galay 145 mudane , hase ahaatee au dib ka yimaadeen mudanayaal kale, waxaa shir gudoomiyanay afhayeenka baarlamaanka Prof, Maxamed Sheekh Cusmaan? (Jawaari).
Muhiimadda ajandaha wakiiladu ay maanta isugu yimaadeen ayaa ahaa su?aallo lagu? weydiinayay wasiirada gaashaandhigga iyo arimaha dibadda ayaa sidoo laga dooday qaar ka mid ah qodobada dastuurka oo quseeya baarlamaanka iyo arimaha bulshada.
Daah-furkii fadhiga kadib ayay mudanayaashu bilaabeen ka doodista qodobo ka mid ah dastuurka dalka intii ay doodu socotayna waxaa goobta soo gaaray R/wasaare ku xigeen ahna wasiirka arrimaha dibadda Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan iyo wasiirka Gaashandhiga C/xakiin Xaaji Maxamuud (Fiqi) waxaana la hor dhigay su'aalo horay ugu diyaarsanaa xildhibaanada.
Su'aalihii wasiirka gaashaandhigga la waydiiyay waxaa ka mid ahayd xarig dhawaan Muqdisho loogu gaystay wariye Ibraahim Maxamed Aaden, isagoo kaga jawaabay inuu wariyuhu sii daayay warbixin ka hadlaysay in maxkamaddu ay dil ku xukuntay nin aan wax qareen ah loo qaban kiiskiisa.
Qorshe dib loogu cusbooneysiinayo Masjidka Ramadaan ee Gaalkacyo oo soconaysa, (Sawirro).